मेकअप ब्रश कसरी सफा गर्ने
धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो मेकअप ब्रश र स्पंज प्राय पर्याप्त सफा गर्दैनन्, र केहि मानिसहरु उनीहरुलाई कहिल्यै सफा गर्दैनन्। तर फोहोर मेकअप ब्रश मुँहासे देखि ई कोलाई संक्रमण सम्म, स्वच्छता र स्वास्थ्य समस्याहरु को सबै प्रकार को कारण हुन सक्छ। पेशेवरहरु संग कुरा गर्यौं-एक त्वचा विशेषज्ञ, एक मेकअप ब्रश डिजाइनर सहित ...
कस्मेटिक ब्रश बनाउने प्रक्रिया
हस्तनिर्मित मेकअप ब्रश को प्रक्रिया फिलिम, वास्तव मा, मानिसहरु जान्दैनन् किन जापानी Hakuhodo मेकअप ब्रश यति महंगा छन्। उच्च अन्त मेकअप ब्रश हस्तनिर्मित छन् र शिल्प कौशल मा धेरै उच्च आवश्यकताहरु छन्-यो कारण हो कि यो महँगो छ। एक उच्च अन्त मेकअप ब्रश ...
तपाइँको सुविधाहरु को लागी 18 मेकअप ब्रश सुझाव
तपाइँसँग ती सबै फैंसी मेकअप ब्रश छ, तर के तपाइँ उनीहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छ? धेरै जसो महिलाहरु लाई आफ्नो बाथरूम दराज र मेकअप झोला मा कम से कम केहि मेकअप ब्रश छ। तर के तपाइँसँग सही छ? र तपाइँ तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छ? सम्भावना भन्दा धेरै, जवाफ छैन। सामान्य उपयोग र हेरचाह १ Streamlin ...
मेकअप कसरी लागू गर्ने?
21-09-28 मा व्यवस्थापक द्वारा
1. moisturizer संग सुरु गर्नुहोस्। कुनै फरक पर्दैन कि तपाइँको छाला को प्रकार (सुक्खा, तेल, वा संयोजन), यो दुबै बिहान र रात हाइड्रेट गर्न को लागी महत्त्वपूर्ण छ - र सनस्क्रिन बिर्सन छैन सफाई र टोनिंग सिफारिश (यो रात मा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ!) मोइस्चराइजर लिनुहोस् ...
मेकअप पफ र सौन्दर्य ब्लेंडर मा के फरक छ?
तपाइँ तपाइँको मेकअप दिनचर्या मा एक Dongshen मेकअप स्पंज छान्नु पर्छ? सबै Dongshen मेकअप स्पंज गैर लेटेक्स सामाग्री, जो एक सुपर नरम र उछाल महसुस गरीएको हो। Dongshen मेकअप ब्लेंडर तपाइँलाई एक चिकनी र पनी देखी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, साथै यो विभिन्न कस्मेटिक्स को लागी उपयुक्त छ।
के मैले पहिले फाउन्डेसन ब्रश वा कन्सीलर ब्रश पहिले प्रयोग गर्नु पर्छ?
1. मेकअप अघि छाला हेरचाह मेकअप अघि, तपाइँ मेकअप लागू गर्नु अघि सबैभन्दा आधारभूत छाला हेरचाह कार्य प्रदर्शन गर्नुपर्छ। आफ्नो अनुहार धोए पछि, यो अनुहार र अनुहार छाला moisturize हुनेछ। यो सुख्खा मौसम को लागी पाउडर हानि र मेकअप अधिक नाजुक बनाउन को लागी हो। त्यसपछि बाधा क्रीम लागू गर्नुहोस् ...
के तपाइँ शेभिंग मा सावधानीहरु थाहा छ?
पहिलो कुरा: बिहान दाँत गर्न छनौट गर्नुहोस् बिहान सबेरै दाह्री गर्ने सबैभन्दा राम्रो समय हो। निद्रा को समयमा, छिटो चयापचय को कारण, सेबेशियस ग्रंथिहरु लाई जोरदार स्राव हुन्छ, जसले कपाल छिटो बढ्छ। एक "पागल" रात पछि, बिहान "कटौती आर" को लागी सबैभन्दा राम्रो समय हो ...
तपाइँको दाग लुकाउन कन्सीलर ब्रश कसरी प्रयोग गर्ने?
लुकाउने ब्रश कन्सीलर को वास्तविक आवश्यकताहरु को अनुसार प्रयोग गर्नु पर्छ। एक हात मा, उपयोग को समय मा ध्यान दिनुहोस्, र अर्कोतर्फ, उपयोग को विधि मा ध्यान दिनुहोस्। विशिष्ट उपयोग मा, निम्न चरणहरु लाई बुझ्नु पर्छ। चरण १: मेकअप + सनस्क्रिन लागू गर्नु अघि ...
के तपाइँ जान्नुहुन्छ कसरी सेभिंग ब्रश कायम राख्न?
धेरै लापरवाह पुरुषहरु मर्मत र दाह्री ब्रश को सफाई बेवास्ता गर्नेछन्। वास्तव मा, त्यस्ता उत्पादनहरु कि सीधा छाला संग सम्पर्क रखरखाव र सफाई ध्यान दिनु पर्छ। तेसैले, आज मँ तपाइँलाई सेभिंग ब्रश को रखरखाव र सफाई को बारे मा बताउनेछु। सम्बन्धित ज्ञान, सज्जन ...
कसरी सही eyeliner ब्रश छनौट गर्न?
Eyeliner नरम र प्राकृतिक द्वारा बनाईएको मोटो वा कठोर लाइनहरु बनाउनुहोस्। Eyeliner ब्रश मेकअप को पोस्ट समायोजन को लागी प्रयोग गरीन्छ। पेशेवर ब्यूटीशियन बिरलै मात्र सम्पूर्ण eyeliner, विशेष गरी तल्लो eyeliner रंग। केहि मात्र रंग र केवल eyeshadow प्रयोग गर्दैनन्। कहिलेकाहीँ h लाई जोड दिनुहोस् ...
कसरी एक आधार ब्रश छ कि तपाइँ सूट छनौट गर्ने?
एled्ग्लेड फाउन्डेशन ब्रश यो फाउन्डेशन ब्रश को सपाट खण्ड एक सानो ढलान छ, र कोण आकार लामो फाउन्डेसन ब्रश को एक छेउमा ब्रिस्टल बनाउनेछ, जो मेकअप लागू गर्दा विवरण संग सम्झौता गर्न सजिलो बनाउँछ। Angled फाउन्डेशन ब्रश नरम bristles, उच्च घ छ ...
Dongshen होंठ ब्रश को उपयोग र रखरखाव विधि
होंठ ब्रश flexibly ओठ को छाया समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ, र होंठ कोने को नाजुक किनारा कोर्नुहोस्। हामी कसरी ओठ ब्रश प्रयोग गर्ने? निम्न सम्पादक द्वारा आयोजित होंठ ब्रश को उपयोग को सामग्री हो, म तपाईंलाई मद्दत गर्न को लागी आशा गर्दछु! होंठ ब्रश को उपयोग जब लिपस्टिक लागू, fr शुरू गर्न निश्चित हुनुहोस् ...
© प्रतिलिपि अधिकार - 2010-2021: सर्वाधिकार सुरक्षित। तातो उत्पादनहरु, साइटम्याप
मेकअप ब्रश सेट, मेकअप ब्रश, सेभिंग सेट, मेकअप ब्रश उपकरण, नाई शेभ, मेकअप उपकरण,